Indlu kaGeorge Clarke yakudala eKhaya, iNqaku lesi-4: Umhla wokuQalisa, uMbonisi, isiKhokelo seNqaku - Tv Kunye Nefilimu
Indlu endala yaseGeorge Clarke ubuyile kwiChannel 4. Umboniso wokubuyiselwa kwepropathi ubuyile kuthotho lwayo lwesine apho uGeorge Clarke inceda abaninimzi benze ixesha labo amakhaya alungele ubomi banamhlanje.
Olu luhlu luqale ngoLwesine nge-20 kaJuni nge-8 ngokuhlwa kwiChannel 4-ngesiqendu esitsha esidlala rhoqo ngoLwesine.
Njengoko igama lomboniso libonisa, isingathwe nguGeorge Clarke. UGeorge waziwa ngokukhokela ezinye iinkqubo zeChannel 4 kubandakanya Umboniso waseKhaya , Indoda yokuBuyiselwa , Iindawo ezimangalisayo zikaGeorge Clarke kwaye Indlu embi kwiNdlu ethandekayo .
Yintoni i Indlu endala Ikhaya elitsha malunga?
Ukusuka UVictorian kubuGcisa nobuGcisa , I-Bhritane inezona zindlu zembali zintle ehlabathini ezele isimilo. Kodwa indlela izindlu ezazakhiwe ngayo kwiminyaka eyadlulayo ayisasebenzi kuthi namhlanje. UGeorge uphantsi kwesikhumba samakhaya anembali yokuvula amandla abo ngokwenza izisombululo ezinesitayile seepropathi zexesha ukuze zibenze balungele ukuhlala kwenkulungwane yama-21.
indlela yokuhlela iimpahla
Ukuthatha ngokutsha kwimiboniso yepropathi, inkqubo nganye kuthotho inezinto ezimbini ezahlukeneyo zokwenza, ukusuka kwii-Bungalows zeArt Deco ukuya kwiifama zelizwe. UGeorge ujolise kwiingxaki zoyilo ezisoloko zinamava xa uzama ukufezekisa inkangeleko yale mihla kwikhaya elithile, kwaye uguquko olothusayo lubonisa ukuba ngu kunokwenzeka ukwenza indibaniselwano egqibeleleyo yakudala kunye entsha.
Uthotho 4, Isiqendu 1: UTrnton Heath kunye noStreatham
Kwisiqendu sokuqala, uGeorge ungena kwiNdlu yabaSebenzi yase-Edwardian encinci kakhulu-sisiqingatha sobukhulu benkundla yesikwashi. Ngaba uGeorge angenza yonke intshi yale ndlu isebenze, kwaye anike uHana igumbi lokulala elifanelekileyo? Utyelele nendlu enehombiso engathethekiyo yase-Italiya.
Lo mxholo ungeniswe kwi-Twitter. Unokwazi ukufumana umxholo ofanayo kwenye ifomathi, okanye unokufumana ulwazi oluthe kratya, kwiwebhusayithi yabo.
Uthotho olutsha lweNdlu eNdala, iKhaya elitsha liqala ngokuhlwanje ngentsimbi yesi-8 ngoku @ channel4 nakule veki @iqosweb ibuyile kwaye ikulungele ukuzisa iVol au Vents 🥳🏡 #ndluvuzindlu pic.twitter.com/B2U1JMDuem
-Imveliso emangalisayo (@amazingtelly) NgoJuni 20, 2019
Isiqendu 2: iBromley
Umphathi weziganeko uMitch kunye nomyili wekhitshi u-Elliot kutsha nje bazibandakanya kwisivumelwano eBromley, eKent, kodwa ngoku ikhaya labo elijikelezwe ngenkulungwane likhutshiwe ngokupheleleyo, bangasongeza njani isitayile kunye nenani lekhaya labo? UGeorge unokuba nezisombululo ezimibalabala kwimikhono yakhe ...
igumbi lokulala elipinki nelimhlophe
Isiqendu 3: I-Spa yeLeamington kunye neNgcono
UGeorge ujongana nendlu yomqeqeshi okhethekileyo weLeamington Spa. Abanini abatsha u-Albert no-Kristina banqunyulwe umsebenzi ukuze le ndawo iguqulwe, kwaye nosana olutsha kwiiveki nje ezimbalwa, lukhuphiswano oluchasene nexesha. Ngelixa uGeorge naye encedisa ngokuhambisa iingcango kwindlu esefama kumda weSithili sePiki.
kuludwe lwasekhaya udonga
ELeeds, uGeorge ujongana nendlu yama-Victori- kwaye imiselwe ukuba ibe ngumsebenzi omkhulu. Ngelixa eBrixton, uJason kunye noHana bajongana nokongezwa okunemigangatho emibini. Umceli mngeni kaGeorge kukunceda uthathe isigqibo sokuba wenzeni ngesifuba esikhulu esitshintshayo.
Ndiphose isiqendu ...
Bamba phezulu Apha .
Ngaba ndingafaka isicelo sokuba kulo mboniso?
Ngokuqinisekileyo unako. Ukuba ucwangcisa ukuguqula ingaphakathi lendlu yakho yakudala, kodwa ungazi ukuba ungaqala ngaphi, okanye ufuna ukwenza ukubukeka okumangalisayo okwangoku kodwa ungazi ukuba zeziphi izinto oza kuzikhupha kunye nokuba ungazixabisa, emva koko fumana uncedo kuGeorge lokuguqula ikhaya lakho.
imifanekiso yeeshelfu ezidadayo
Inkampani kaGeorge yokuvelisa, Imveliso emangalisayo , khangela izindlu zabo bonke ubukhulu, nawo onke amaxesha oyilo, kubandakanya iipropathi ezidwelisiweyo. Nceda uqaphele, kufuneka ube nemali epheleleyo, kunye nemvume yokuceba xa kukho imfuneko.
Ungathumela iqela nge-imeyile info@amazingproductions.co.uk, jonga Thatha inxaxheba iphepha lewebhusayithi yabo kunye zilandele kwi-Twitter ngolwazi oluhlaziyiweyo malunga neeprojekthi zezindlu abazifunayo.
UOlivia Heath Umhleli oLawulayo weDijithali, iNdlu entle yaseUK U-Olivia Heath nguMhleli weDijithali oLawulayo kwiNdlu entle yase-UK apho uxakeke khona ekufumaniseni ezona ntsingiselo zekhaya zinkulu ngomso, zonke ngelixa ehambisa inkuthazo yegumbi elinesitayile, izisombululo zendawo encinci, izimvo ezilula zegadi kunye nokhenketho lwendlu kwezona ndawo zishushu kwimarike.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
imibono yokupenda igumbi lokulala
uyilo lwangaphakathi ekhaya
nini ikrisimesi kulo nyaka
ukuba utyale ntoni ngomngcelele
Igumbi lelanga izimvo zefanitshala